नेपाल का खेलाडीहरुलाई Blackjack रणनीति | BlackJack77
मुख्य	/ ब्लेक रणनीति
कालो जैकका लागि सिक्ने रणनीतिहरू बिना खेल सुरु गर्न यो नम्र हुनेछ। रणनीतिहरूले तपाईंलाई एक योजना विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ जसले तपाईंलाई एक विजेता बनाउन सक्छ - अन्यथा, तपाईं भाग्य हुने कुनै ग्यारेन्टीमा गणना गर्नुहुनेछ।
एक आवश्यक ब्ल्याक जैक रणनीति गाइडले तपाईंलाई सुरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ। विभिन्न खेलाडीहरूले निर्णयहरू राम्ररी सोचेका छन् जसले खेलको लागि टोन सेट गर्न मद्दत गर्दछ। कालो ज्याक चार्टको प्रयोग गरी सबैभन्दा मुख्य रणनीति हो।
ब्ल्याक ज्याकमा कति धेरै डेकहरू एक प्रश्न हो कि धेरै खेलाडीहरूले सोध्छन्, र जवाफ निर्भर गर्दछ जसमा भिन्नता खेल्न सकिन्छ। सबैभन्दा आधारभूत, एक डेक प्रयोग गरिन्छ। तथापि, यो खेल खोज्न सम्भव छ जुन आठ डेक कार्डहरू प्रयोग गरिरहेको छ। प्रत्येक डेकले कुल 52 कार्डहरू पाउनेछ, जो कार्डहरू बन्ने मात्र कार्डहरू छन्।
एक पटक तपाईं डेक संख्या को साथ एक साथ तपाईं खेल रहे हो विचार, यो जब तपाईं खडा, हिट वा डबल डाउन गर्नुपर्छ आधारित एक खेल बनाउन सजिलो हुनेछ। यसलाई प्राप्त गर्न सरल तरीका एक कालोपत्र चार्ट को प्रयोग गर्न को लागी हो।
बहु-डेक ब्ल्याकज्याकमा अधिक उच्च-मान कार्डहरू (10 को) हुने फाइदा छ, जसले तपाईंलाई डबल डाउन चालुको व्यापक दायरा दिन्छ। एकल डेक ब्ल्याकैक रणनीति धेरै सरल छ जसले बहु-डेक, विशेष गरी यदि तपाईं कार्ड गणना गर्नुहुने छ। यसले तपाईंलाई सजिलो बनाउँछ जसको शीर्ष माथि कुन कार्डहरू डेक बाहिर छन्।
एक डेक ब्ल्याकैक बाधाहरु बहु-डेक बाधाहरु भन्दा सानो तटोमा हुन्छन्, विशेष गरी जब यो दुग्ध पार्नु र एक हात टाँस्न आउँछ। यो सरल छ किनभने 10 को मानको साथ कार्ड धेरै कम छन्।
डबल डेक ब्ल्याक जैक भनेको डीलर खेल खेल गर्दा एक को बजाय दुई डेकको कार्डहरू प्रयोग गर्दछ।2डेक ब्ल्याक ज्याक रणनीति को लागी डगलिङ गर्न परिचित हुनु आवश्यक छ।2डेक ब्ल्याक ज्याकसँग, यो कुनै दुई दुई कार्डमा डुबाउन सम्भव छ, र एक पनि विभाजन पछि डबल डेट गर्न सक्दछ। यस चार्टले तपाइँको रणनीतिको लागि प्रयोग गर्न सक्छ:
जब तपाईं डेकहरूको साथ खेल्दै हुनुहुन्छ भने थप डेक ब्लैकज्याक बाधाहरु थप विस्तृत हुन्छ।
4 डेक ब्ल्याक ज्याक रणनीतिमा बाधाहरू छन् जुन डबल डेक ब्ल्याकैक बाधाहरु भन्दा जटिल छ। यहाँ एउटा चार्ट हो जुन तपाईं सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ:
ब्ल्याक ज्याक रणनीति6डेक दुई वा चार डेक विकल्पहरूको तुलनामा हिट वा खडा गर्न विभिन्न अवसरहरू छन्। यहाँ एउटा रणनीति गाइड हो जुन ठूलो मद्दत हुन सक्छ।
8 डेक ब्लैकज्याक रणनीति फरक छ किनभने खेलको निश्चित चर सेट गरिएको छ। यसमा खेलहरूमा सहभागी हुने खेलाडीहरूको संख्या, साथसाथै कुल bankroll समावेश गर्दछ।
ब्लैकज्याक स्विच बाधाहरू सामान्यतया 0.58% घरको किनारा छ, यद्यपि यो छ जब डेक आठ डेकको सट्टा छ। यी बाधाहरू यो प्रकारको खेल खेल्दा उच्च हुन्छ, त्यसपछि तपाईंलाई एक समयमा दुई हात खेल्न आवश्यक पर्दछ।
आधारभूत ब्ल्याक ज्याक रणनीति चार्टहरू धेरै हुन् र ब्ल्याक ज्याक खेलको प्रकारमा निर्भर छ जुन तपाइँले खेल्न चाहानुहुन्छ हुन सक्छ सन्दर्भमा निर्दिष्ट चार्ट पाउन आवश्यक पर्दछ। आधारभूत ब्ल्याक ज्याक रणनीति चार्टहरू चार र आठ डेक बीचको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँ एक उदाहरण हो जहाँ डीलर सफ्ट 17 मा छ।
ब्ल्याक ज्याक सरल रणनीति चार्ट पनि अर्को उपकरण हुन सक्छ जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र यसलाई सम्मोहन गर्न सम्भव छ।
अहिलेसम्म, तपाईंले ब्ल्याक ज्याक चार्टहरू देखाउनुभएको छ जुन तपाइँ कसरी कसरी जीत गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कार्डहरू प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केहि अन्य चार्टहरू छन् जुन तपाईं पनि सामना गर्नुहुनेछ। यी मध्ये एक ब्लैकज्याक ह्यान्ड चार्ट हो जसले तपाईंलाई थाहा मानहरू कार्ड मानहरूको तुलनामा कुन मानहरू खेल्न सकिन्छ भनेर थाहा दिन्छ। ब्लैकजैक बाधाहरु चार्टले तपाइँलाई प्रत्येक खेललाई पूर्ण रूपमा पूर्ण बनाउन मदत गर्न सक्छ। जबकि ब्ल्याकज्याक हिट चार्टले व्यापारीलाई कार्ड दिएपछि 21 सम्भव हुन सकेसम्म कसरी निर्देशन दिन्छ।
आधार प्रयोग गरेर डीलरलाई नरम 17 हिँड्नु पर्छ, यहाँ ब्ल्याक ज्याक धोका पाना हो जुन तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको कालो ज्याक विजयी रणनीतिको साथमा यी चार्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्। ब्लैकज्याक हिट रहन चार्ट अत्यन्तै सम्भवतः ब्ल्याकैक्स उत्तम रणनीति सिर्जना गर्ने सबै भन्दा सरल तरिका हो। उन्नत ब्लैकज्याक रणनीति हो जहाँ तपाईं बीमा लिनुस्, 10 स्केटिङ र अन्य धेरै बारे जान्न सक्नुहुन्छ। तपाइँले खेल्नुहुँदा, समयहरू छन् जब ब्ल्याकैकमा हिट हुँदैन। यसमा नरम 17 वा कम मारेर समावेश गर्दछ र हार्ड 11 वा कम हिट छनौट गर्दछ।
कालोज्याकमा कार्डहरू कसरी गणना गर्ने?
खेलाडीहरूले कार्डबोर्ड कसरी ब्ल्याकैकमा गणना गर्न सोध्दछन् ताकि तिनीहरू जित्न सक्दछन्। यदि तपाईं ठोस प्रणालीको साथ आउनुभयो भने यो सरल छ।
सबै समयको सबै भन्दा पुरानो रणनीतिहरु मध्ये खेलाडीहरूका लागि ब्ल्याकैक कार्ड गिनती हो जसले लगातार जित्न रुचि राख्दछ। यो प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक छ - कालो ज्याकमा कार्ड गणना गर्दैछ? कार्ड गिनतीले उन्मूलन र सम्भावनाको प्रक्रिया समावेश गर्दछ। यो स्थापित गर्न को लागी लग रहेको छ कि बाकी कार्डहरु को आधार मा एक फायदा हुनेछ कि डीलर को बाहिर छ। यसले एक प्लेयरलाई पनि मद्दत पुर्याउँछ शर्तको आकार निर्धारण गर्दछ।
सफल हुन, तपाईंलाई कार्ड गिनती रणनीति आवश्यक छ। ब्ल्याकैकमा कार्डहरू कसरी गणना गर्ने बारे केही सुझावहरू छन्। जब तपाईं धेरै डेकहरूसँग खेल्न सक्नुहुनेछ, तपाइँसँग याद गर्ने प्रयास गर्ने एक राम्रो मेमोरीको आवश्यकता छैन कि प्रत्येक कार्ड कसरी कतिपय व्यवहार गरिएको छ। त्यहाँ एउटा सजिलो प्रणाली हो। प्रत्येक कार्डको मान आवश्यक छ। 2-6 बीचको संख्या ट्याग +1 गर्न सकिन्छ। 7-9 को बीच कार्डहरूलाई ट्याग दिईन्छ। 10 बाट 10 - ए ट्याग 1 दिन सकिन्छ।
एकपटक तपाइँले मानहरू नियुक्त गरेपछि, त्यहाँ धेरै ब्ल्याक ज्याक काउन्टिङ प्रणालीहरू छन् जुन तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो, चलिरहेको गणना हो। मानहरू नियुक्त गरिएका मूल्यहरू प्रयोग गरेर, तपाइँले कार्डहरू थप गर्न वा घटाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यस राउन्डको लागि हिड्ने गणना शून्य छ।
अब तपाईलाई खेल को लागि यो अर्थ बुझ्न आवश्यक छ। तपाईंको चलिरहेको गणनाले तपाईले बनाउनु पर्ने शर्तको प्रकारलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। एक सकारात्मक चलिरहेको गणना भनेको अनडल्ट कार्डहरू मानमा ठूलो वा उच्च हो, र एक खेलाडीले उनीहरूको शर्त बढाउन सक्छ। नकारात्मक चलिरहेको गणना भनेको अडल्ट कार्डहरू सानो हो; यसैले तपाईंको शर्तमा कमी पर्याप्त हुनेछ।
यी सुझावहरूको साथ, तपाईं सजिलै संग ब्ल्याक ज्याक कार्ड कसरी सजिलो तरिकामा गणना गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।